Soo-saareyaasha Jaadka Mandarin-Wooden Shrimp-Shiinaha Mandarin-Wooden Shrimp Squid Jig Suppliers & Factory
Jilib squid midab leh oo hufan
Ku habboon Kalluumeysiga Squid- Si sahlan loo isticmaalo. Sidoo kale waa u sahlan tahay qofka cusub. Naqshad fiican ayaa awood u leh
kordhi catches iyo abuuro xiiso badan.
Saamaynta ifaysa- Jid dhalaalaya, muddo dheer, irbad jillaab khafiif ah, adayg wanaagsan, bar -bar lahayn. Waa fududahay in kalluunka ka soo jillaab.
Dhammaan waa Handmade- jillaab bir -bir ah, jillaab calal oo dhumuc gaar ah leh, si xoog leh u jiid. Marka dabagaalaha la qabsado, ma sahlana in la baxsado.
Electroplate Jilib squid iftiin leh
Waa daruuri kalluumeysi oo loogu talagalay kalluumeysatada.
Ficil quusitaan oo deg deg ah.
Waa aalad xoog leh oo lagu qabsado kalluunka waaweyn.
Way fududahay in la isticmaalo sababtuna tahay isku -darka habboon ee ruxruxa iyo rogidda.
Ku habboon labadaba isticmaalka cusub iyo isticmaalka xirfadeed.
Indho waaweyn oo electroplating qaabka kalluunka squid jig
Qaabka Dharka Kombiyuutarka Squid Jig
Wax -soo -saarka kalluumaysiga Chentilly wax -soo -saarka iyo jijimooyin tayo leh oo jumlad leh, oo ay ku jiraan qaabab iyo cabbirro kala duwan; sida kuwa ifaya, kuwa marada dhaldhalaala, jillaabyada qaabka kelida ah ama doule.
Ugu horrayn jiga -jillaabku waa aalad kalluumeysi oo aad u weyn kalluumeysiga biyaha cusbada leh, sida dhoobada iyo qamriga octopus. Ka dibna waxaan ku siinnaa jigs squid tayo Japan leh, haley dhab ah oo noole ah si loo soo jiito kalluunka. Waxa ugu muhiimsan oo ah inaan u fidinno macaamiisheenna adeegyo xirfadeed, si aan u noqonno taageeradaada weyn ee ganacsigaaga.Waxaad dooran kartaa caaryada inta badan xiisaynaya, waxaad kaloo yeelan kartaa baakadda sumaddaada.